Tsy tohizina indray ilay efa natomboky ny fitondrana teo aloha ao amin’ny PSE, ilay fikisahana miandakana amin’ny fanombohana ny taom-pianarana amin’ny volana martsa fa miverina miditra mianatra amin’ny volana oktobra indray ny mpianatra ary tsy foanana ny CEPE. Sanatria ve tsy matotra izay dingana efa vita tany aloha ? Araka ny nambaran’ny praiminisitra Ntsay Christian, isika eto Madagasikara dia tsy maintsy mijery ny zavatra tontolo misy eto amintsika kanefa ny fampianarana eto amintsika dia mifandray amin’ny fotoam-pampianarana any ivelany. Mahatsapa ny rehetra, hoy izy, fa tsy mety io tetiandrom-pampianarana io. Reraka ny ankizy noho io fanapahan-kevitry io ka Tsy maintsy ovana sy hahitsy. Hatramin’izay, tsy nahitana olana firy mahakasika ny tetiandrom-pampianarana teo aloha, hoy ny praiminisitra. Mizara ny hevitra raha ny marina. Ny « éducation fondamentale de neuf ans » na ny sekoly fanabeazana fototra sivy taona no voafaritra ao anatin’ny PSE. Midika izany fa zaraina telo ireo ambaratongam-pampianarana ireo ka 5 taona ho an’ny ambaratonga voalohany ary 4 taona kosa ho an’ny CEG. Izay rehetra izay dia niteraka tsy fitoviana ara-kevitra satria ao ambadik’io dia tsy tokony hisy intsony CEPE, hoy i Ntsay Christian. Zavatra nisy ary noraisina daholo ny hevtry ny besinimaro fa isika tsy maintsy miroso ka tsy maintsy namerenana amin’ny « cycle » teo aloha amin’ny fidirana amin ny taom-pampianarana amin’ity taona ity. Ahoana ary no ahitana vokatra amin’ny fanavaozana ny rafi-pampianarana raha mandroso mihemotra ny fanapahan-kevitra raisina. Rahoviana vao tena izy ny rafi-pampianarana eto amintsika fa toa andrakandrana izay atao ho fanatsaràna ny kalitaon’ny fampianarana ?